सजिलो लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा देवघाटमा – Hamrofm
Home / Business / सजिलो लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा देवघाटमा
Editor Hamrofm March 8, 2018	Business, Local, News Leaveacomment 19 Views
चितवन,फागुन २४- तनहुँको आँबुखैरेनी मुख्य कार्यालय रहेको सजिलो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले पवित्र तीर्थस्थल देवघाटधाममा शाखा विस्तार गरेको छ । पहिलो शाखा आँबुखैरेनीमै सञ्चालन गरेको संस्थाले दोस्रो शाखाका रुपमा बिहीबारबाट देवघाट गाउँपालिका वडा नम्बर ५ स्थित शाखा सञ्चालन गरेको हो । शाखा कार्यालयको देवघाट गाउँपालिका उपाध्यक्ष विमला थापाले उद्घाटन गरिन् । उनले देवघाटमा निम्न आर्थिक स्तर भएका व्यवसायीका लागि वित्तीय संस्था सहयोगी बन्नुपर्ने बताइन् । “यस क्षेत्रका मान्छेहरुको पहुँचमा बैंक छैनन्”, उनले भनिन्, “लघुवित्तले उनीहरुको आयआर्जनमा सहयोग गर्न सक्छ, त्यसै गर्नुहोला ।”
लघुवित्तका सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. खेमराज भेटुवालले निम्न आयस्तर भएका सर्वसाधारणलाई आयआर्जनको लागि बाटो देखाउन आफूहरु देवघाट प्रवेश गरेको बताए । उनले बैंकमा प्रवेश गर्नसमेत हिच्किचाउने सर्वसाधारणलाई लघुवित्तले व्यवसायी बनाउने बताए । “विनाझन्झट सजिलो सेवा दिन हामी फरक ढंगले उपस्थित भएका छौं”, उनले भने, “यसबाट भरपुर फाइदा लिनुहोला ।” बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक टीकाराम चापागाईंले कोही पनि सर्वसाधारणले पैसाको अभावमा व्यवसायबाट वञ्चित हुन नपर्ने बताए । उनले एकदमै छोटो अवधिमा बैंकिङ सेवा दिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । शाखा उद्घाटनका अवसरमा संस्थापक विशाल चापागाईं, देवघाट गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष एलबहादुर लामा, स्थानीय पूर्णबहादुर कुँवरलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
२० करोड अधिकृत पुँजी रहेको राष्ट्रियस्तरको यो लघुवित्त संस्थाको चुक्तापुँजी १४ करोड रहेको नायब प्रबन्धक पूर्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनले सानो लगानीमा व्यवसाय गर्न चाहनेहरुलाई व्यावसायिक योजनाका आधारमा १५ हजारदेखि ३ लाखसम्म पहिलो वर्षमै लगानी गर्ने बताए । त्यसपछि कामको मूल्यांकन आधारमा लगानी बढाउँदै लैजाने उनले बताए । लघुवित्तले चालु आर्थिक वर्षभित्रै थप ६ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालन गरिसक्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए ।
Previous मोफसल यात्रामा ‘शत्रु गते’ टिम, चितवन आएर के भने कलाकारले ?
Next चितवन सिटी मर्सि लायन्स क्लवले १०८ औ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनायो
कालिकोट : कालिकोटको खाडामा गत साता रक्सी पार्टीका कारण आगलागी भएको हुनसक्ने बुझिएको छ । रक्सी …